मानवीय नेता कसरी बन्ने ?| Yatra Daily
राजेन्द्र प्रसाद कोइराला पुस २८, २०७८ बुधबार
एक नेताको हैसियतमा, असल मानिस भएर नेतृत्वको जिम्मेवारी लिँदा आउने कठिन कामहरू कसरी गर्नुहुन्छ ? यो सबै नेताहरूको लागि अनन्त समस्या हो ।
हामी मध्ये धेरैजसो सोच्दछौं कि हामीले असल व्यक्ति हुनु वा कडा, प्रभावकारी नेता बन्ने बीचमा एउटा कठिन, बाइनरी छनौट गर्नुपर्छ । यो झुटो द्विविधा हो । मानव हुनु र कठोर नेतृत्व निर्णयहरू पारस्परिक रूपमा अनन्य छैन । साँच्चै भन्ने हो भने, कठिन कामहरू गर्नु प्रायः मानिसको सबैभन्दा ठूलो काम हो ।
त्यहाँ दुई मुख्य तत्वहरू छन् : बुद्धि र करुणा ।
बुद्धिमानी नेतृत्वको अवधारणा दयालु हुनुपर्छ । बुद्धिले मानिसहरूलाई के उत्प्रेरित गर्छ भन्ने गहिरो बुझाइ र पारदर्शी हुन र असहज हुँदा पनि के गर्नुपर्छ भन्ने साहसको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । समर्थन र मद्दत गर्ने सकारात्मक नियतका साथ अरूको लागि वास्तविक हेरचाह र चासो देखाउने गुणको रूपमा करुणालाई लिईन्छ ।
लगभग १ सय देशहरूमा ५ हजार भन्दा बढी कम्पनीका नेता र कर्मचारीहरूको अध्ययनले के देखाउँछ भने बुद्धि र करुणाको असाधारण शक्ति हुँदो रहेछ ।
बुद्धि वा दया देखाउने नेताहरूसँगका कर्मचारीहरूसँग शुद्ध र सकारात्मक अनुभवहरू छन् । तिनीहरू रमाइलो गर्छन् र आफ्नो काममा संलग्न हुन्छन् र अरु प्रती इर्ष्या र डाहा गर्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । जब एक नेताले बुद्धि र करुणा दुवै प्रदर्शन गर्दछ । कर्मचारी कल्याण र उत्पादकतामा उल्लेखनीय प्रभाव भएको पाइएको छ ।
एक कर्मचारीले गर्ने काम ज्यादै सन्तोषजनक पाइएको स्टान्फोर्ड र हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा गरेको अध्ययनले देखाएको छ । उनिहरुको काम प्रतिको उत्साह र उमङ ८६% भन्दा पनि बढी पाईएको छ ।
अचम्मको कुरा होइन, तथापि, वास्तवमा बुद्धि र करुणाको यो संयोजनको साथ नेतृत्व गर्न सजिलो छैन । आफ्नो सकरात्मक चेतको बिकास गर्दै निरन्तर प्रयास गर्नु जरुरी छ । यस् प्रयोगलाई सिक्दै र अभ्यास गर्दै जानु जरुरी छ । पहिलो ठुलो कदम भनेको “नेतृत्व” को अर्थ के हो भनी बुझ्नु र आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । मानव हुनुको अर्थ के हो भनी बारम्बार पुनरावृत्ती गर्न जरुरी हुन्छ ।
धेरै सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, व्यवस्थापन भनेको अरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, मानिसहरूमाथि कार्यकारी नियन्त्रणको अभ्यास गर्नु हो । अर्कोतर्फ, नेतृत्व भनेको अरूलाई हेर्ने र सुन्ने, दिशा तय गर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र के कती कार्यकारी अधिकार दिने भन्ने पनि हो ।
“यदि तपाइँ नेताहरूको रूपमा हाम्रो भूमिका के हो भनेर सोच्न थाल्नुभयो भने, यो वास्तवमा एकदम सरल छ,” चिकित्सा उपकरण कम्पनी भेरियनका सीईओ क्रिस टोथ भन्छन् । “हाम्रो भूमिका निर्णय लिने वा कोठामा बसेर म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गरी आफुलाई चतुर र जान्ने व्यक्ती ठान्ने होइन । वास्तवमा, कम्पनीको लागि खतरनाक हुन सक्छ यदी सबै निर्णय एउटै व्यक्तीबाट लिने प्रयोग अवलम्बन गरेमा ।
यसको सट्टा, तपाईंले विभिन्न दृष्टिकोणहरू स्वीकार गर्ने ! करुणा र सशक्तिकरणको संस्कृति सिर्जना गर्नुपर्छ । यसले मानिसहरूको रचनात्मकता, उत्पादकता र खुशीलाई खोल्ने र प्रस्फुटित गर्ने काम गर्छ ।”
यस प्रकारको नेतृत्व दृष्टिकोणलाई बढावा दिन, यो स्वीकार गर्न महत्वपूर्ण छ कि हामी हाम्रो जागिर शीर्षक होइनौं, हामी मानव हौं, अन्य मानिसहरूसँग मानव स्तरमा जडान हुन चाहन्छौं । यहाँ तपाईंको नेतृत्वमा थप मानवता ल्याउन चार तरिकाहरू छन् ।
सुनौलो नियम सम्झनुहोस् :
करुणा, यसको मूलमा, अरूलाई खुसी देख्ने इच्छा र यो हुन मद्दत गर्न कदम चाल्ने तत्परता हो । यो मूलत ः सुनौलो नियमको अभिव्यक्ति हो । अरुलाई पनि त्यस्तै गर जसरी अरुले तिमीलाई गरून् ।
सुनौलो नियम बुद्धिमानी अनुकम्पालाई कार्यमा राख्नको लागि एक उपयोगी कदम हो किनकि यसले अर्को व्यक्तिको दृष्टिकोणलाई विचार गर्न आवश्यक छ ।
जब हामी आफैलाई अर्को व्यक्तिको जुत्तामा राख्न सक्षम हुन्छौं, हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई नयाँ रूपले हेर्न सक्छौं । हामी परिस्थितिको एक दृष्टिकोण छ भनेर पहिचान गर्न एक क्षण लिन सक्छौं, तर चीजहरू, र सम्भवतः अर्को व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट धेरै फरक देखिन सक्छ ।
यो आजको बढ्दो विविध कार्य वातावरणमा विशेष गरी सत्य हो । हामीले आफूलाई अरू कसैको जुत्तामा राखेर सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ ! हामीले तिनीहरूको वास्तविकता बुझेका छैनौं, जसको लागि राम्रो सुन्नु आवश्यक छ ।
ध्यान दिएर सुन्नुहोस् :
हाम्रा दुई कान छन् तर मुख एउटै छ । यसको मतलब हामीले बोलेको भन्दा दोब्बर सुन्न सक्छौं र सुन्नुपर्छ ।
जब तपाइँ साँच्चै अरूको कुरा सुन्नुहुन्छ, तिनीहरूले सुनेको र देखेको महसुस गर्नुहुन्छ, जसले मानवको रूपमा हाम्रो प्राथमिक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ ।
यदि तपाईं ध्यानपूर्वक सुन्न सक्नुहुन्छ, खुला दिमाग र सिक्न इच्छुकताका साथ, तपाईं न केवल बुद्धिमानी बन्नुहुनेछ, तर तपाईं साँच्चै अरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाइँसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी आउँदैछ भने, तयारी गर्न थप समय लिनुहोस् । यसको मतलब सही प्रकारको वातावरण स्थापना गर्नु हो ताकि तपाईं पूर्ण रूपमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ वा
समस्या समाधान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अर्को व्यक्तिले के चाहन्छ र महसुस गर्नुहुन्छ भनेर वास्तवमै सुन्न र महसुस गर्ने आकाङक्षा लाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ ।
आफैलाई सोध्नुहोस्, म कसरी लाभदायक हुन सक्छु :
एउटा चिनियाँ उखानले भन्छ, दयाको कुनै उपाय छैन; करुणा नै बाटो हो ।” तपाईं कसरी अरूको लागि लाभदायक हुन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नु, , “अनुकम्पाको बाटो” हो ।
जब तपाईं कसैसँग संलग्न हुन लाग्नुहुन्छ, त्यस व्यक्तिको लागि के भइरहेको छ भनेर सोच्नको लागि एक क्षण लिनुहोस् । के चुनौतीपूर्ण वा राम्रो जाँदैछ ? र त्यसपछि आफैलाई सोध्नुहोस् ः उनीहरूको संघर्षलाई जित्नको लागि उनीहरूलाई कस्तो सहयोग चाहिन्छ ? कठिनाइहरू सिर्जना गर्ने तिनीहरूको अप्ठ्यारा ठाउँहरू बारे थप आत्म–जागरूकता प्राप्त गर्न उनीहरूलाई कुन चिज चाहिन्छ ? तपाईंले मानिसहरूलाई भेट्नु अघि यी प्रश्नहरूमा प्रतिबिम्बित गर्नाले उनीहरूको वृद्धि र विकासमा केन्द्रित थप मानव अन्तरक्रिया सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ ।
मानिसहरूलाई उनीहरूको क्षमता हेर्नको लागि झकझक्याउनुहोस् :
हामी सबै प्रदर्शन र प्रशंसा गर्न चाहन्छौं । एक असल नेताले आज हामी जो हौं भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्छ तर हामीलाई आफूलाई तन्काउन र हाम्रो साँचो क्षमताको अँझ बढी महसुस गर्न अँझ राम्रो गर्न चुनौती दिन्छ । यो सजिलो छैन ।
जब कसैले पहिले नै राम्रो गरिरहेको छ, तिनीहरूलाई अँझ राम्रो गर्न धकेल्नु हतोत्साहित र निराशाजनक हुन सक्छ । तर नेतृत्व भनेको मानिसहरूलाई खुसी पार्न र उनीहरूलाई सन्तुष्ट र सहज महसुस गराउन खोज्नु मात्र होइन ।
नेतृत्व भनेको मानिसहरूलाई उनीहरूले सामना गर्न नचाहेका चीजहरूमा प्रकाश चम्काएर कठिनाईसँग जुध्नलाई उत्प्रेरणा दिनु पनि हो । यी असहज कुराकानीहरूबाट टाढा रहनुको सट्टा, मानिसहरूलाई तिनीहरूको लागि साँचो हेरचाहको सङ्केतको रूपमा विस्तार गर्न आफ्नो भूमिका हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
जब हामी हाम्रो नेतृत्वमा हाम्रो अधिक मानवता ल्याएर बुद्धिमानी अनुकम्पा अभ्यास गर्छौं, हामी एक संस्कृति सिर्जना गर्न सक्छौं जसले गर्दा मानवताको भावना र कम्पनीको उतपादकत्वमा वृद्धि भई सुनौलो वातावरण सिर्जना हुन सक्दछ ।
नेताको हैसियतमा हामीले जनतामा परेको प्रभावलाई कहिले पनि कम आँकलन गर्नु हुँदैन । हामीसँग उनीहरूको जीविकोपार्जन नियन्त्रण गर्ने शक्ति छ । उनीहरूले गर्ने काममा हामीसँग शक्ति छ । र तिनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरामा हामीसँग शक्ति छ । यो ठूलो जिम्मेवारी हो ।
यसले मानिसको कामको अनुभव, उनीहरूको प्रतिबद्धताको भावना र कामको कार्यसम्पादनलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्नमा अँझ बढी सफल हुन सकोस् भन्नका खातिर नेतृत्वको कडा परिश्रमलाई मानवीय तरिकाले गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनाउँछ ।
हामी मध्ये धेरैजसो सोच्दछौं कि हामीले असल व्यक्ति हुनु वा कडा, प्रभावकारी नेता बन्ने बीचमा एउटा कठिन, बाइनरी छनौट गर्नुपर्छ । यो झूटो द्विविधा हो । साँच्चै भन्ने हो भने, कठिन कामहरू गर्नु प्रायः मानिसको सबैभन्दा ठूलो काम हो । त्यहाँ दुई मुख्य तत्वहरू छन् – बुद्धि र करुणा – र यसले दुवैसँग नेतृत्व गर्न सिक्न र अभ्यास लिन्छ, साथै परम्परागत व्यवस्थापन बानीहरूको केही अशिक्षा ।
त्यहाँ चारवटा महत्त्वपूर्ण प्रविधिहरू छन् जुन तपाईंले एक बुद्धिमान, दयालु नेता बन्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ : सुनौलो नियम सम्झनुहोस् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् आफैलाई सोध्नुहोस् कि तपाई कसरी लाभदायक हुन सक्नुहुन्छ ? मानिसहरूलाई उनीहरूको क्षमता हेर्नको लागि उत्प्रेरणा दिनुहोस् ।
भलीबल र क्रिकेटलाई उछिनेर सबैको मन पर्ने खेल बनेको फुटबलको कथा
डा. शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेसका बाजिगर
मोटोपन र अधिक तौलको कारण, समाधानको उपाय, नेपालमा मोटोपनको अवस्था
सुध्रेला त् कांग्रेस ?